Semalt: Zvikonzero Zvikonzero nei Hackers Ichirwisa Iyi kana Iyoyo Website
Ndiyo munyengetero wevanhu vose vane webhusaiti kuti varege kupinda mumaoko e-cybervanyengeri sevanokuvadza. Iyo yose yepasi rose yakazara yakazara nemhando dzakawanda dzedzimwe dzadzo dzakarurama apo dzisina zvinangwa zvakajeka.Bhizinesi rega rega reInternet rinenge riri maererano ne SEO uye kuti ungabudirira sei paIndaneti. Kuchengetedzwa kwewebsite kunenge kusati kwanyanya kunetseka paunoita mawebsite.Vanhu vanowanzoedza kuvaka masayiti nemunhu wekupedzisira kana chinangwa chokupedzisira chewebsite yepfungwa - web sayfası alma. Zvavasingazivi ndechokuti vatengesi vanopedzakurara usiku uchiedza kuwedzera kushandiswa uye nzira, izvo zvinogona kuwedzera mabasa avo. Zvimwe zvekudengenyeka, izvo vaseki vanoshandisa mavaringuva yose yekutsvaga inobva kune zvitsva uye zvinouya zvinoshandiswa, izvo zvinoita kuti rese bhizimisi risvike.
Kuti ugare kure navashambadziri, unogona kutanga udzidze kuti sei avo vanovhunduka vachikanganisikawebsites. Heino urongwa hunoitwa naMax Bell, the Semalt Mutengi Wakabudirira Muteereri, unoita kuti chiedza chitsva pazvikonzero zvese zvinokonzerwa neHacker:
Makwikwi asina kukodzera mune imwe e-commerce munda inowanzozivikanwa, kunyanya kana vanosekwa vachitambabasa. Vanhu ava vane mukana wekubira mutsamba ye email kubva kune webhudhiro yewebhishopu uye uchishandisa iyo kutora vatengi. Mune imwematambudziko, vanogona kuburitsa nzvimbo yakadai seDDoS hacks, uko mabhinetsiti makuru anorwisa sevha nemamiriyoni ezvikumbiro panguva. Izvivaseki vangave vachida kubhadhara mubhadharo kuti vabvise zvavanoshandisa zvichikonzera kurasikirwa kukuru.
2. Kuba Cheari.
Kubiridzira kweKyber kunotora mafuta kubva pakuvhara. Mazhinji emari ekunyengera ari kufamba pamusorointernet inobva kune dzimwe nyika mabhengi uye dzimwe nzira dzokubhadhara dzakadai sePayPal. Mune dzimwe nguva, vaseki vanogona kushandisa SQL Injection kupinda kuvanhulogins uye kuita shanduko dzemari sekunge kuti vaiva vanhu chaivo. Vamwe vaseki vanogona kukwereta chikwereti vachishandisa ruzivo rwomunhu.
3. Bata contact information.
Vanotsvaga vanowana ruzivo rwakanyanya rwemunhu. Vashandi veKyber vanogona kushandisa ruzivo urwukuti aite zvinotyisidzira kune akabatwa. Vamwe vanhu vanogona kuita zvikanganiso vachishandisa maakaiti akavharidzirwa, chete kuendesa dambudziko kune vasina kufungamunhu. Mune zvimwe zviitiko, ruzivo rwemunhu wega sekadhi rekuzivikanwa, SSN uye motokari yelayisensi inogona kuva chinhu chekutengesa mumutsetse werima. Kubata kuzvizivikanwauye humwe hunyengeri huripo hunoenderana nenyaya idzi. Vashandi vanofanira kungwarira nezvemhando idzi dzevashandi.
4. Kuvhiringidza rugare.
Vamwe vaseki vangave vasingadi kuti venge vopinza munhu anotambudzwa. Zvisinei,vanoita kuti pave nehutano hwekutsvaga paIndaneti uye vanogona kuita kuti webhusaiti yenyu ive neGoogle hack mureza. Mawebsite akadaro ane dambudziko nekunyoresa,uye iyo yose inogona kuita kuti SEO yako isakundikana.
Pane zvikonzero zvizhinji zvekuti nei muchengeti aizowana chido chekukandira webhusaiti yako.Iro internet yose yakazadzwa neyemagadziri e-cyber anotora zvakasiyana-siyana zvehutfumi hwemabhiza pamwe chete nekuchengetedzwa kwevashandi. Iyo yose yekutengesa ruzivoyevanhu vazhinji avo vakambosangana nevashambayi zvinotyisa zvikuru. Somuenzaniso, vatengesi vanogona kuratidza hupenyu hwomunhu akakurumbirakuburikidza nemamwe mifananidzo, zvavanogona kutora kubva paIndaneti. Zvimwe zvikonzero nei vatengesi vangavhiringidza iwe webhusaiti yako mune iri murairo. Unogonadzidza zvimwe zvezvo uye uwedzere kuchengeteka kwe e-commerce website yako nevanopenga.